Qowmiyad mudo qarniyo ah ku nool qaabaadka Tansaaniya oo door biday inay nololasha cusub la jaanqaadaya – Madal Furan
Hoy > Warka > Qowmiyad mudo qarniyo ah ku nool qaabaadka Tansaaniya oo door biday inay nololasha cusub la jaanqaadaya
Qowmiyad mudo qarniyo ah ku nool qaabaadka Tansaaniya oo door biday inay nololasha cusub la jaanqaadaya
Madal Furan – Xubno ka tirsan qabiil ka tirsan qabaa’illada wadanka oo muddoo 10,000 oo sano ku noolaa dhaqashada xoolaha, beer-falashada ayaa waxaa haatan soo wajahaya cabsi la xiriirta in ay ku jahawareerayaan la qabsiga nolosha casriga ah.
Hadza, waa qabiil waxaana ay wajahayaan xakaar ay ku qabaan sidii ay ku ilaashan lahaayeen xuquuqdooda dhuleed, iyo sidii ay dhulkooda uga heli lahaayeen biyihii saafiga ahaa, xayawaankii ay la noolaan jireen ee ay soo ugaarsan jireen.
Qabaailka Hadza-ha oo iyagu leh luuqad u gaar ah oo ay isku afgartaan ayaa waxa ay luuqadoodu ka duwan tahay tan looga hadlo gobolkan Bariga Afrika intiisa kale.
Waxaa la aaminsan yahay in qabiilkaasu uu sii dabar-go’ayey marba marka ka dambeysa inta haatan noolna waa keliya 1,000 qof oo Hadza ah, waxa ay la qabsan la’ yihiin nolosha magaalooyinka iyo tan casriga ah.
Waxaa laga soo qaaday sawirro muujinaya iyaga oo guryahooda ay iyagu leeyihiin ku dhex guryahaasi oo ku yaal xeebta afaafka hore ee harada Lake Eyasi, ee degmada Ngorongoro oo dhacda dhanka Waqooyi ee wadankaasi.
Waxaa la aaminsan yahay in qabiilkaasu uu sii dabar-go’ayey marba marka ka dambeysa inta haatan noolna waa keliya 1,000 qof oo Hadza ah, waxaana ay metalaan jufadii ugu dambeysay ee qabiilkaasi weli ka nool, waxa ayna ku nool yihiin ugaarsi iyo wax beerasho waxaana la arki karaa iyaga oo weli nolol fiican raadinaya. Waxaa la sheegay in ay ku agnool yihiin goob qadiimi ah oo lagu duugi jirey dadkii zamaankii hore noolaan jirey.
Cuntada ay qabiilkan cunaan waa khudaar iyo geedka loo yaqaan Baobab Tree, kaasi oo ay burburiyaan kadibna ay ka sameystaan cunto iyo cabitaan, khudrada ay isku jar jaraan waa kabsar caleenta iyo basasha kadib waxaa ay beertaan bagalka iyo waxyaalaha dhulka ka soo baxa ee khudradda ah, waxaana ay ka sameystaan cunto dhadhankeedu aad u fiican yahay.
Sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa halkaasi booqday nin proffesor ah oo ka socdey jaamacadda King’s College isaga oo qabiilkaasi booqday waxaa uuna sheegay in dadkani ay heystaan waxyaalo iyo cuntooyinka ugu caaafimaadka badan dunida oo dhan, isagoo sheegay in qabaa’ilkaasi ay isticmaalaan cuntooyinka caloosha bixiya iyo kuwo nafaqo badan oo ay caado u leeyihiin in ay cunaan.
Ajnebi Al-shabaab lagu sheegay oo lagu qabtay duleedka Dhoobley